Ngisebenzisa kanjani i-competitive backlinks ngenzuzo yami?
Yebo, i-giant search giant igcina isitshela ukuthi ukulungiswa kwayo okuyinhloko kugxile ekuqukethwe okuphezulu okuletha inani langempela kumsebenzisi. Akungabaza, okuqukethwe okwamanje kuyinkosi. Nanobe kunjalo, iphrofayli ye-link ye-website yonkhe i-website ihlala isigaba sesibili esibaluleke kakhulu se-Google. Yingakho kungekho sidingo sokuthi lezo zinkimbinkimbi ze-backlink ziphakathi kwezingxenye ezisemqoka zomqondo wanamuhla we-Search Engine Optimization. Ngisho ukuphatha kabi ngephrofayela yakho ye-backlink ayikwazi ukuhluleka ukuletha noma yikuphi ukuzuza okulinganiselwe kepha kungalimaza inqubekela phambili yakho yamanje. Ngaphezu kwalokho, uma i-Google imangalela iwebhusayithi yakho noma ibhulogi ekukhohliseni, ingase ihambe ngokweqile lapho konke kuphelela ngokukhipha imali emiphumeleni yokusesha kanye kanye naphakade (ngaphandle kwalokho, ukuvinjelwa unomphela ekusesheni). Yingakho ukuhlaziya izinkampani zangemuva zokuncintisana - ngokuzuza kwabo okuthembisayo kakhulu kanye nezinkinga ezimbi kakhulu - kungaba isinqumo esenziwe kahle osidingayo ukuze usebenzise isu elihle lokuxhumanisa isixhumanisi kungenzeka. Futhi ngizokukhombisa ukuthi ungahlaziya kanjani izixhumanisi zakho zangemuva zokuncintisana. Ngakho-ke, ngezansi kukhona izinyathelo ezintathu ezilula zokuqhuba ucwaningo olufanele futhi usebenzise okuningi emakethe wakho.
Tfola Abaphikisi Bakho Bamakhasimende
Ngaphambi kokucwaninga noma yikuphi ukubuyisela emuva kokuncintisana, kuzodingeka ukuthi ubone amawebhusayithi aphumelele kunazo zonke eziphikisana nabaseduze emakethe emakethe, noma umkhakha wakho oyinhloko wembonini. Futhi lo msebenzi empeleni uyaphatha kakhulu, ongase ucabange. Kepha mina, ngangivame ukusebenza ngokuqhubekayo futhi ngifunde ukunqoba nokuhluleka kwabadlali bami kusengaphambili. Okungcono, ukuhlonza izimakethe zakho zemakethe kufanele kwenziwe ngaphambi kokuba iwebhusayithi yakho noma ibhulogi iphile. Noma kunjalo, manje sekuyisikhathi esiphezulu uqhubeka nokuhlaziywa okubanzi kokuncintisana ukuze usebenzise ama-backlink angcono kakhulu kunompikiswano yakho. Angazi ukuthi ungaqala kuphi? Ngincoma ukusebenzisa i-Serpstat, ithuluzi lamahhala le-inthanethi elangisiza kakhulu ngokuqonda izitha zami eziyinhloko ze-niche. Ukubeka ngesiNgisi esicacile, ungasebenzisa leli thuluzi ukuze uthole amawebhusayithi wabaphikisi bakho abaphumelele kakhulu. Uma ucabangela inani lamagama angukhiye, ubungako obujwayelekile besayithi, nokuthi iqiniso lihambisana kahle, uzokwazi ukuthi ungaqala kuphi.
Yazi Imigomo Yakho Eyinhloko
Ngokuvamile, i-PA (igunya lekhasi), i-DA (igunya lesizinda), kanye ne-PR (iphakethe lekhasi) yizona zinto eziyinhloko zephrofayela ye-backlink yonke. Ngokusobala, inhloso yakho ukuthi ube nemaphuzu aphezulu kunamathemitha amathathu. Ngaleyo ndlela, kufanele futhi wazi idatha elandelayo - inombolo ye-backlinks yakho yokuncintisana esikalini (ngamakhasi okudlulisela kanye nezizinda), kanye nesithombe esikhulu sezintambo zokusekela ezilungiselelwe i-SEO (inombolo yabo, ukusatshalaliswa, nokuhlukahluka kwamagama angukhiye, ukufaka uphawu , nezinye izindawo ezibucayi).
Hlaziya umncintiswano we-Competitor Backlinks
Yiqiniso, ayikho ifomula yonke yokuphumelela. Noma kunjalo, ukusebenzisa amathuluzi okuhlaziya ukuthola ukuqonda ngokujulile kwe-backlink yakho yokuncintisana cishe kuyindlela engcono yokuphuma emncintiswaneni wemakethe. Ngakho-ke, uzodinga ukuhlaziywa kokuncintisana kwewebsite ngayinye ngephrofayili efanele yokuxhumanisa etholakala phezulu kokusesha okufanele. Ngaleyo ndlela, ngincoma ukuthi ngizame enye yezinto ezilandelayo zokuhlaziya emuva kwe-backlink - Vula indawo yokuhlola (Moz), Semalt Analyzer, Screaming Frog, noma ama-Ahrefs - ngizame konke. Kepha mina, noma kunjalo, iqoqo eliyinhloko lemisebenzi yabo lifaniswa ngokugcwele, ngisho naphezu kwezici eziningana ezifanekisiwe nezihlungi eziphambili ezinikezwe i-Analyzer (Semalt) ne-Open Site Explorer (i-Moz). Ngakho-ke, kuwukuphela kwakho ukuthi unqume ukuthi ubani ozozama kuqala. Uma usuqalile ukuqonda okulungile, konke okudingayo ukuphinda uphinde ulandele emuva izimpendulo ezinamandla kakhulu zabamelene nawe, noma okungenani uthole ukuqonda okuphelele kwenqubo yokwakha isixhumanisi ku-niche yakho Source .